Channel-Mandalay| Khakee (2004)
ဒီယိုဒါလို နိုင်ငံရေးသမားစုတ်တွေကို ကာကွယ်ပေးနေကြတယ်
တာဝန်အရ ဒေါက်တာ အန်စာရီက ချန်ဒန်ဂါရ်မှာ သူ့တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေတာ
အဲ့ဒီ သူတောင်းစား ဒီယိုဒါက သူ့ဘဝကို ဖျက်ဆီးခဲ့တာ
အင်စပက်တာ သေ့သ်လည်း သူ့တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့တာ ဂေါပဒီလည်း အတူတူပဲ
စစ်သားတွေက တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေတာ အဓိပ္ပါယ်မရှိ သေနေကြရတယ်
ဒီတာဝန်အတွက်ပဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄၈ နာရီက ကျုပ်တို့ သေမင်းနဲ့ စစ်ခင်းခဲ့ကြတာ
ကျုပ်တို့ ဌာနကိုယ်တိုင်က ကျုပ်တို့ကို သတ်ပစ်ချင်နေကြတာ
အဲ့ဒီ ဒီယိုဒါက ဥပဒေကို အကြိမ်ကြိမ် မုဒိန်းကျင့်နေကြတာဗျ….
ကျုပ်တို့ အရာရှိ နိုင်ဒူကိုယ်တိုင်က သူ့ဘောကို မနေတာကိုးဗျ
,ရဲဌာနက လိုချင်ရင် အစိုးရက ဆုံးဖြတ်ရင်
မြို့ထဲက ကလေးကစားစရာအရုပ်ကိုတောင် ဘယ်သူမှ ဖမ်း မရဘူး
ဒါပေမယ့် အမှန်တရားက ကျုပ်တို့ ရဲတွေဟာ
တာဝန်ဆိုတဲ့ နာမည်ကြီးနဲ့ လိုင်စင်ရထားတဲ့ အဝတ်အစားတွေ ဝတ်ထားကြတယ်
အပြစ်မရှိ ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကို လူသားမဆန် လုပ်နေရတာလွဲလို့ ဘာမှ လုပ်မရဘူး အဲ့ဒါပဲ
စည်ပင်က အလုပ်သမားကမှ ကျုပ်တို့ထက် သာသေးတယ်
ကျုပ်တို့လို ကာကီရောင် ဝတ်ထားတယ် ချီးတွင်းထဲ ဆင်းတယ်
မြို့တော်ရဲ့ ချီးတွေကို သန့်ရှင်းပေးဖို့!
ကျုပ်ရဲ့ တာဝန်က အန်စာရီကို တရားရုံးကို ပို့ဖို့ ပြောတယ်
အဲ့ဒါကို ကျုပ် လုပ်မယ်
ခင်ဗျားရဲ့ တာဝန်က ကျုပ်ကို တားဖို့ဆိုရင်
ခင်ဗျား ကျုပ်ကို ပစ်လိုက်…..”
Khakee (2004) သည် IMDb 7.4/10 Google users 87% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Rajkumar Santoshi
ရိုက်ကူးထား၍ Shridhar Raghavan, Rajkumar Santo တို့က ဇာတ်ညွှန်းရေးသားထားကာ သရုပ်ဆောင် Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Ajay Devgn တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Crime, Drama ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…..
လက်ရွေးစင် ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာ အကြမ်းဖက်သမားလို့ စွတ်စွဲခံရသူတစ်ဦးကို ချန်ဒန်ဂါရ်ကနေ မွမ်ဘိုင်းကို စောင့်ရှောက်ပို့ပေးရတယ် ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ခရီးစဉ်ကို ရဲဝန်ထမ်းဟောင်းတစ်ဦး ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က မွမ်ဘိုင်းကို မရောက်အောင် တားဆီးတဲ့အခါ သက်စွန့်ဆံဖျားခရီးတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းသွားတဲ့အခါ ဘယ်လို အက်ရှင် ရာဇဝတ်မှု ဒရမာတွေ ဖြစ်လာမလဲ ဇာတ်ကားမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားကြည့်ကြပါခင်ဗျာ…